महाशिवरात्री : पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भक्तजनको घुइचो (फोटो/भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महाशिवरात्री : पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भक्तजनको घुइचो (फोटो/भिडियो)
काठमाडौँ । आज महाशिवरात्री, हिन्दूधर्मावलम्बीहरुले भगवान् शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्री पर्व मनाईरहेका छन्।
फागुन कृष्ण त्रियोदशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रीलाई पर्वलाई सम्पूर्ण दीनदुःखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरुको हृदयमा धर्मको उदय गराउने भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रुपमा लिइन्छ ।
यस पर्वका दिन उपवास बसी रातभर जाग्राम गरेर शिवको प्रिय गाईको दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाएमा सर्वसिद्धी लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । आजका दिन भगवान शिवलाई जाडो नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक घर, चोक र मठमन्दिरमा दाउरा बालेर धुनी जगाउने गरिन्छ।
महाशिवरात्रीको अवसरमा काठमाण्डौस्थित पशुपतिनाथको दर्शन र शिवरात्रीको मेला भर्न देशका विभिन्न स्थान तथा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि भक्तजनहरुको घुईंचो लागेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मेला भर्न आउने भक्तजनको सुविधाका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाएको जनाएको छ । कोषले दर्शनका लागि आएका भक्तजनको लाईन तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको जनाएको छ। तिलगंगा, जयबागेश्वरी र गुहेश्वरी तर्फबाट दर्शनार्थीको लाईन व्यवस्थापन गरिएको छ। नशालू पदार्थ सेवन गर्न नदिन व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कोषले पशुपति मन्दिर परिसर भित्र गाजा, भाङ लगायतका नशालु पदार्थ सेवनमा रोक लगाउन सुरक्षा र निगरानीलाई चुस्त राखेको जनाएको छ।
कोषले यस वर्ष १२ लाखसम्म दर्शनार्थी आउने अनुमान गरेको छ। महाशिवरात्रीका अवसरमा पशुपति क्षेत्रको अलावा मुलुकभर रहेका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुँइचो लागेको छ। आजको दिन नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी विभिन्न शिवालयमा गई श्रद्धाभक्तिपूर्वक महादेवको पूजा-आराधना गर्ने चलन छ।